Ukuncibilika kweqhwa kungasiza ngokwengxenye ukuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunokuhlukahluka okuningi okuthinta ukufudumala komhlaba kanye nokushintsha kwesimo sezulu. Kwesinye isikhathi kunezimo ezifaka isandla ekwandeni kwemiphumela emibi, kepha kwezinye izikhathi, kwenzeka izehlakalo ezinomthelela ekuthuthukisweni kwayo.
Yize ukukhuphuka kwamazinga okushisa okubangelwa ukufudumala kwembulunga kubangela ukuncibilika kweqhwa lonyaka ngaphambi kwentwasahlobo, lokhu kuyakuvumela amahlathi abolayo angamunca isikhutha esiningi womkhathi. Kwenzeka kanjani lokhu?
1 Iqhwa liyancibilika
2 Izifundo zokumunca i-CO2
Ukufudumala kwembulunga yonke kungenxa yokumuncwa kokushisa yi-carbon dioxide ekhishwa yizenzo zabantu. Amafutha avuthayo, amalahle negesi yemvelo zikhiqiza umoya ongcolile okhulisa ukushisa kweplanethi, futhi lokhu kubangela ukuba iqhwa licibilike ngaphambi kwesikhathi salo. Njengoba isimo sezulu emhlabeni siguquka, kukhona ukushesha kwezinqubo ezithile njengokuncibilika kwamakhekheba eqhwa asezindaweni ezibandayo, ukukhuphuka kwamazinga olwandle nokwanda kokuvama kwemicimbi yezulu eyeqile.
Ukwazi ukuminyana okuqondile kwesikhutha emkhathini, kufanele kulinganiselwe phakathi kwalokho okukhishwayo futhi kumuncwe izitshalo ngenkathi kwenziwa i-photosynthesis namanye amasinki e-CO2 ezilwandle.
LAmahlathi eBoreal aziwa njengezinkomba ezibalulekile ze-CO2, kepha bancike ngokuphelele enanini leqhwa abanalo, ngoba kuyisici esinqumayo sokumuncwa kwe-CO2. Uma kuneqhwa eliningi, bayoncipha i-CO2, yize futhi bekhombisa ukushisa okwengeziwe.
Izifundo zokumunca i-CO2
Ukusiza ukubala ushintsho ekuthathweni kwekhabhoni, Iphrojekthi ye-ESA yeGlobSnow isebenzisa idatha yesathelayithi ukukhiqiza amabalazwe amboza iqhwa nsuku zonke kulo lonke iNyakatho Nenkabazwe phakathi kuka-1979 no-2015.
Ukuqala kokukhula kwezitshalo emahlathini abizayo kuyaqhubeka kusuka isilinganiso cishe sezinsuku eziyisishiyagalombili eminyakeni engama-36 edlule. Lokhu kuholela ekutheni izimila zikwazi ukugcina i-CO2 eningi uma iqhwa selincibilikile. Lokhu kutholwe yithimba lososayensi abasebenza ngokukhethekile kwesimo sezulu kanye ne-remote sensing, eholwa yi-Finnish Meteorological Institute.
Lapho bethola lolu lwazi, baluhlanganisa nokushintshaniswa kwesikhutha phakathi kwemvelo nemvelo emahlathini aseFinland, eSweden, eRussia naseCanada. Lapho sebekwenzile lokhu, iqembu likwazile ukuthola ukuthi ukuthuthuka okulindelwe kwentwasahlobo kudale ukugcinwa 3,7% ngaphezulu kwe-CO2 kunakuqala. Lokhu kufaka isandla ekunciphiseni ukukhishwa kwe-CO2 emkhathini obangelwe ngabantu.
Ngaphezu kwalokho, okunye okutholwe yileli thimba ukuthi umehluko ekusheshiseni kwentwasahlobo kwenzeka ngendlela evelele emahlathini ase-Eurasia, ukuze ukumuncwa kwe-CO2 kulezi zindawo kuphindwe kabili maqondana namahlathi AmaMelika.
“Imininingwane yesethelayithi ibambe iqhaza elibalulekile ekuhlinzekeni ulwazi ngokuhlukahluka komjikelezo wekhabhoni. Ngokuhlanganisa imininingwane yesathelayithi neyasemhlabeni, sikwazile ukuguqula ukubonwa kokuncibilika kweqhwa kube yimininingwane esezingeni eliphezulu yokusebenza kwentwasahlobo nokwenziwa kwekhabhoni, ”kusho uSolwazi Jouni Pulliainen, owayehola ithimba labaphenyi eMeteorological Institute. IsiFinnish.
Imiphumela etholakele kulolu phenyo izosetshenziselwa ukuthuthukisa amamodeli wesimo sezulu nokwenza izibikezelo ngokushisa komhlaba. Njengolwazi oluningi ososayensi abanalo ngokusebenza kwemvelo nokushintshana kwabo ngezinto namandla emkhathini, ngcono amamodeli wokubikezela ukuthi bazolungiselela izimo ezintsha zokuguquka kwesimo sezulu ezisilindeleyo.
Kubalulekile ukufaka ulwazi ngenhloso yokwenza izinqubomgomo ezisisiza ekunciphiseni ukuguquka kwesimo sezulu noma ukuzivumelanisa nemiphumela yako emibi eminingi emphakathini. Lolu cwaningo lumele intuthuko emkhakheni wokumunca i-CO2.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukuncibilika kweqhwa kungasiza ngokwengxenye ukuguquka kwesimo sezulu
Kungaba khona i-Ice Age Encane?